Ekuphishekeleni isibalo esihle, abesifazane abaningi baya yonke into: baziqede ngokwenza izivivinyo ezinzima, baphuze "amapilisi" amaphilisi bese bedla "amafutha-okushisa" ama-powders. Kulesi sihloko, sizoxoxa ngokuningiliziwe ukuthi yini i-Fito Slim Balance, futhi ucabange ngempendulo yangempela yabathengi kanye nemibono yolwazi kulo mkhiqizo oklanyelwe ukunciphisa isisindo.
Cishe eminyakeni emibili eyedlule, isidakamizwa esisha satholakala emakethe yezidakamizwa zokulwa nokukhuluphala - isiphuzo "Phyto Slim Balance", okusho ukuthi abakhiqizi, basiza enyangeni eyodwa kuphela ukuba balahlekelwe kufike ku-15 kilograms yesisindo esiningi.
Ukudla okunciphisa i-Fito Slim Balance kuyinto i-powder egcwele isikhwama seplastiki, esibonisa ingilazi ene-white white. I-novelty yenze ngokushesha isakaza: ku-site ngayinye-otzovik yaqala ukuvela impendulo yentshiseko evela kubathengi ukuthi ithuluzi lisebenza ngempela. Kodwa eqinisweni, ukubuyekezwa kwaba yinto engaphezu nje kokunyakaza kokuqamba umenzi womenzi - babevele bakhokhelwa.
Ukulinganisa kwe-Fito Slim, ekuqinisekisweni komkhiqizi, ucebile amavithamini, amaminerali, amaprotheni kanye ne-carbohydrate efanele. Kungakanani okungokoqobo okuhambelana nokuyiqiniso, sizosizwa ukuqonda ukwakheka kwe-cocktail:
Casein. Ihlanganiswe nge-powder ngendlela ye-calcium caseinate. Isetshenziselwa izici zomzimba njengendlela yokwanda kwemizimba emisipha. Ngokweminye imibiko, ukusetshenziswa kwamaprotheni okuyinkimbinkimbi kunomthelela ekulahlekeni kwesisindo, kodwa kuphela ngemithwalo yamandla amakhulu.
Amaprotheni we-Whey. Ngokusho kwemiphumela yocwaningo, iphrotheni ephumelela kakhulu kune-casein. Unomphumela we-tonic, unciphisa umthwalo emzimbeni, ukwandisa igciwane. Ukusebenzisa i-whey protein kusiza ukulwa nezifo zesibindi. Iqukethe ama-antioxidants kanye nama-amino acids, iphrotheni yenza ijubane lwakhiwa kwe-muscle mass.
Amavithamini, ama-macro nama-microelements. Umkhiqizi uthula ngokuqukethwe kwezinto eziwusizo ku-Fito Slim Balance, noma kunjalo, ekukhangiseni ikhambi alikhohlwa ukukhuluma ngokuthi "usizo" lwezidakamizwa eziqukethe isisindo sokulahlekelwa isisindo.
I-Dextrose, i-glucose. Ishukela lamagilebhisi, i- carbohydrate, okudingekayo kubadlali ababhekene nokucindezeleka okukhulu ngokomzimba. Kodwa ekubunjweni kwezindlela zokulahlekelwa isisindo, akufanele kube, ngoba isikhathi esinconywayo sokuthatha i-cocktail kusihlwa. Konke oyisebenzisayo ngalesi sikhathi, kusetshenziselwa amafutha emaceleni nasesisu.
I-Maltodextrin. I-Patok, ithola imikhiqizo eminingi ye-confectionery. Ngokugaya nokukhishwa kwekhalori kufaniswa neshukela evamile. Ukusetshenziswa kwemikhiqizo equkethe i-maltodextrin kungaba yingozi kubantu abanesifo sikashukela. Abantu abazimisele ukulahlekelwa isisindo futhi bangahlanganyeli emidlalweni kufanele baqede ngokuphelele le nhlobo ekudleni kwabo, njengoba kubangele ukuqashwa kwamakhilogremu engeziwe.
Ekubheka ukubunjwa, umkhiqizi wamane nje wanquma ukuxuba izinhlobo ezimbili zamaprotheni nezinhlobo ezimbili zama-carbohydrate, ukuze enze "umkhiqizo oyingqayizivele novelisayo" wokuthola isisindo, hhayi ukulwa nawo.
Izinzuzo ze-Fito Slim Balance
Ukubuyekezwa kwangempela komkhiqizo kuqukethe ulwazi ukuthi i-cocktail isiza ukujabula, ijabule. Isiphuzo sinikeza amandla, sikwanelisa indlala futhi, okubaluleke kakhulu, silula ukulungiselela.
Izinzuzo eziyinhloko (ngokusho kwesikhangiso sezimpahla):
Ukwakhiwa kwemvelo ngokuphelele.
Ukungabikho kokuphikisana nemiphumela emibi.
Umkhiqizi uhlale ethule mayelana nephuzu lokugcina, engabonisi emaphaketheni noma kumkhangisi wezimpahla noma yimuphi idatha onomphumela wayo ohlangothini. Kodwa! Ngokusho kwabokudla okunomsoco, kuze kube manje akukho isidakamizwa esisodwa esisetshenziselwa ukulahlekelwa isisindo, esingenalo ukuphikisana futhi esingenzi ithonya elibi emzimbeni.
Ukungafani kokusetshenziswa kwe-Fito Slim Balance
Impendulo yangempela mayelana ne-cocktail ithi ithola inzuzo yesisindo futhi ibangele ukusabela okweqile. Ngokusho kwedatha engenhla ekubunjweni komuthi, isiphuzo siyaphikisana:
Abesifazane abakhulelwe nabanamathela;
Abantu abanesifo sikashukela kwanoma yiluphi uhlobo;
Abantu abanomlando wokungabekezelelani kumaprotheni obisi;
Abantu bahlala bebhekene nezifo zesikhumba, kanye nalabo abanezinkinga ngokugaya (ukuqotshwa, ukwanda kwe-asidi yesisu).
Mayelana nemiphumela emibi ye-ejenti esetshenziselwa isiphuzo ngaphambi kokulala, abaningi bayakhulisa ukwanda kwesisindo somzimba, ukwanda kwesifiso nesifiso samaswidi.
Ukwenza i-cocktail, izipuni eziyi-3 ze-powder kufanele zihlanjululwe ngamanzi noma ijusi elisha elinyanyisiwe, i-kefir enamafutha aphansi, ubisi futhi ixubene kahle ne-blender. Ukunambitha, ungakwazi ukwengeza izithelo noma amajikijolo ngokuqukethwe okushukela okuphansi. Ama-syrups, i-jam, ama-powder nama-nectar, kanye nama-fatty creams ukuze ahlaziye i-powder ayinconywa, njengoba lokhu kuzokwandisa okuqukethwe kwekhalori kwesiphuzo.
Ngokomkhiqizi, i-Fito Slim Balance yokulahlekelwa isisindo kungcono ukuthatha ebusuku, esikhundleni sokudla. Kodwa ochwepheshe abaningi batusa ukuphuza ukuphuza esikhundleni sekusasa ekuseni, phakathi kwesidlo sasekuseni nesidlo sasemini (noma kunomunye wokudla kwansuku zonke) futhi ... ngokushesha uqale ukuqeqeshwa okujulile.
Ukungena emzimbeni, i-dextrose ne-maltodextrin bayashesha ngokushesha, okubandakanya ukushisa kwamandla. Amandla kufanele adliwe ngokushesha ngangokunokwenzeka, ngaphandle kwalokho ama-carbohydrate azoguqulwa abe amafutha amasha, futhi isisindo sizoqala ukukhula.
Ngemuva kokuthi uphuze ingilazi yokugqoka, kufanele uthathe umsebenti womzimba ngokushesha - lokhu kuzosiza ukusebenzisa ngokushesha amakholori bese ugwema ukuqoqwa kwezicubu ze-adipose ngaphansi kwesikhumba.
Abathandi bokudla okumnandi futhi okusheshayo bakhuthazwa ukwandisa umsebenzi wokusebenza nsuku zonke futhi basuse ukudla okulimazayo ekudleni, ngaphandle kwalokho umphumela ngeke ubonakale. Ukuphuza kusebenza kuphela ngokuhambisana nezinye izindlela zokulahlekelwa isisindo.
Njengoba abakhangisi bethi, i-Fito Slim Balance isiphuzo izokusiza ukuthi ulahlekelwe isisindo ngesikhathi esifushane. Ukubuyekeza mayelana nakho kuphikisana kakhulu, kodwa iningi liguqula into eyodwa - ithuluzi lisebenza, kodwa akufanelekile imiphumela emangalisa.
Njengomthetho, ungahlangabezana nezimpendulo zalolu hlobo:
I-cocktail isiza ukuvimbela ukudla, kwenza kube lula ukubekezelela ukudla kanye nemisebenzi enamandla ngokomzimba.
Ngenxa yesiphuzo, isisindo samasonto amane sokudla kwesiphuzo sinciphile ngo-5 kg, futhi imisipha yaqala ukukhulunywa.
Ukungavikeleki komzimba kwaqina, amakhaza aqala "ukweqa" iqembu.
Kwakukhona umuzwa wokukhanya kuwo wonke umzimba, isimo sengqondo sithuthukisiwe.
Izipikili nezinwele ziqina, isikhumba sihlanzekile - konke ngenxa yamavithamini, amaprotheni nama-amino acids akha i-Fito Slim Balance.
Izimpendulo ezithandekayo zangempela azivamile, iningi lazo liyisinyathelo se-PR kuphela senkampani edayisa umkhiqizo.
Ezimweni eziningi, i-negative ihlotshaniswa nokusetshenziswa okungalungile komkhiqizo noma ukwehluleka ukuhambisana nemigomo yokudla okunconywayo. Kwakukhona amacala lapho ukusebenzisa i-cocktail kubangele ukuzuza isisindo esiphezulu.
Mayelana nomuthi, abathengi bathi okulandelayo:
Ngemuva kokufunda okungu-1 kokuphuza isisindo, isisindo sanda ngamakhilogremu amaningana.
Kwakukhona ukulangazelela amaswidi kanye nofulawa.
Ngosuku olulandelayo emva kokusebenzisa i-cocktail emzimbeni owakhayo, kwakune-itch eqinile.
Ukunambitheka nokungaguquguquki komuthi kufana nobisi obumnandi obushukela, sebenzisa izidakamizwa kwabaningi abazange baqaphele.
Izinga likashukela egazini lihle kakhulu ngokusetshenziswa kwesiphuzo.
Ekuqaleni, isisindo sancipha kancane, futhi ngemva kokuba umuthi uhoxisiwe, wanezelwa.
Izindlela zokungena azizange zithinte isisindo esiningi. Abanye abangeke batusa ukuthenga i-cocktail Fito Slim Balance.
Ukubuyekezwa ngesiphuzo sabaningi kuyisizo esikhulu endabeni yokuthenga umkhiqizo. Kodwa ukuthenga noma cha, kungumuntu siqu. Kodwa emakethe yezimpahla zobuhle nempilo, kukhona nemikhiqizo engcono kakhulu, engabizi yesenzo esifanayo.
Intengo nokuthi ungayithenga kuphi
Izindleko ezijwayelekile ze-cocktail zivela kuma-ruble angu-900 kuya ku-1500. Ithuluzi langempela lingathengwa kuphela kwiwebhusayithi esemthethweni yomkhiqizi, noma kusukela kubamele abathengisi benkampani.
Muva nje, isiphuzo saqala ukusebenza emiphakathini ehlukahlukene ekuxhumaneni nomphakathi. Ngokomkhiqizi, ukuthenga imikhiqizo akufanele kube khona, ngoba ezimweni eziningi umkhiqizo ungaphenduka, noma abakwa-scammers badayisa amafake esikhundleni sokuqala.
Esikhathini sokukhangiswa kwezidakamizwa ngokuvamile kutholakala ulwazi ukuthi i-cocktail idlulisele zonke izinhlobo zokuhlolwa kwamaklinikhi, ukuthi iphephile futhi iyasiza emzimbeni, ngaphezu kwalokho, cishe kuyisifo esibuhlungu kuzo zonke izifo nokukhuluphala. Kodwa ingabe kunjalo ngempela? Ingabe i-Fito Slim Balance iqhaza ekuhlolweni, futhi izingxenye zayo azilimazi umzimba uma zilashwa? Impendulo eyodwa-eyigugu ayikho.
Yiqiniso, inhlanganisela yamaprotheni amabili anzima (i-casin kanye ne-whey protein) esiphuzweni yenza ithuluzi elihle kakhulu lokukhulisa ubunzima be-muscle nokuthuthukisa imisebenzi evikela umzimba. Kodwa ukusetshenziswa kwama-carbohydrate, iphesenti yalo engaboniswa kuphakheji, kungathinta kakhulu inqubo yokukhipha isisindo esiningi, kanye nempilo yabantu ngokujwayelekile.
Abaningi bokudla okunomsoco bayavumelana ngento eyodwa: ukugwinya ukudla, isiphuzo esisodwa ngeke sikwanele. Kungcono ukusebenzisa inhlanganisela yemifino nokudla kwamaprotheni (inhlanzi, isifuba sezinkukhu, inyama yenkomo). Ukusheshisa umzimba kubasiza ukudla okuphindaphindiwe kaningi, izikhathi ezingu-6 ngosuku, nokudla okulula (izithelo, izithelo ezomisiwe, amantongomane, imikhiqizo yobisi evutshiwe).
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi uma ungenzi izinguquko empilweni yakho, ungaqala ukulandela ukudla, khona-ke isisindo ngeke sinciphise. Lokhu kudinga okungenani ubuncane bokusebenza ngokomzimba futhi, ngokuqinisekile, ukudla okunempilo. Ukulahlekelwa isisindo kuwumsebenzi oqhubekayo kuwe, okudinga ukubekezela nokuzikhandla okukhulu.
Isazi sezaseFrance uPierre Ducant. Ukudla kukaPaul Ducan ukulahlekelwa isisindo: incazelo, imiphumela
Imfundo yobulili yezingane zasenkulisa. Isici sobulili ekukhulisweni kwezingane zasenkulisa